Fahasalamana - Sakafo Nutri | Nutri Diet (Pejy 2)
Tanisao miaraka amin'ireo tombontsoa lehibe valo atolotry ny voatabia serizy ho an'ny fahasalaman'ny olona.
Jereo ny fanazaran-tena tsara indrindra hampihenana ny sandrinao ary inona ny tetika tsara indrindra hahatratrarana sandry voafaritra sy tsy matavy kokoa.
Betsaka ny olona mitady fomba iray hampihena ny lanja miorina amin'ny fanatanjahan-tena, sakafo, kapsily, anana, menaka ary koa miorina amin'ny ...
Ity no ambaratonga borg izay tokony ho fantatrao hahafantarana ny haavon'ny ezaka, harerahana ary ny hamafinao ilainao hifehezana amin'ny fanazaran-tenao.
Raha te hikarakara ny vatanao ianao dia mamporisika anao hihinana voankazo mandavantaona, amin'ity indray mitoraka ity, dia fantaro hoe inona ireo voankazo lohataona.
Ny fivalanana dia mety hanelingelina tokoa ary azon'ny rehetra atao izany. Mianara mifehy azy amin'ny fotony miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka omena anao eto ambany ireto
Mihazona tsiranoka ve ianao? Jereo ny fomba fanesorana voajanahary amin'ny alàlan'ny fahazarana, sakafo ary zavamaniry tsara indrindra.
Ireo no fananan'ny cauliflower, legioma avy amin'ny fianakaviana broccoli izay misy tombony lehibe koa ho an'ny vatana.
Jereo ny sakafo tsara indrindra hahazoana tombony hozatra. Sakafo samy manana ny fiaviany sy mety ho an'ny vegetarian sy vegan.
Ny menaka mineraly dia avy amin'ny solika, fantaro izay toetrany, inona izy io, inona ny tombony entiny amintsika ary aiza no ahafahantsika mividy azy.
Ny fampiofanana amin'ny fiakarana tohatra dia karazana fanatanjahan-tena izay misy tombontsoa ara-pahasalamana maro. Ianaro ato daholo ity fiofanana ity.
Ny iray amin'ireo zavamaniry fanafody tsy tokony halainao dia ny echinacea, fantaro ny fananany ary ny fomba fanjifana azy soa aman-tsara.
Ireo no fananana, tombontsoa ary kalitao tokony ho fantatrao momba ny stevia voajanahary, ny fomba tsara indrindra handaniana ireo lovia mamy anao.
Ny yaourt Greek dia ho lasa yaourt tianao indrindra, noho ny tombony lehibe sy ny fananana ara-tsakafo mahery, holazainay aminao eto ambany izany.
Fantaro ny fampiasana glycerine legioma faran'izay tsara, tsy handiso fanantenana anao izy ireo satria tsy vitan'ny hoe hikarakara ny hoditrao fotsiny fa koa amin'ny vatanao.
Lazainay aminao ny fomba ahafahanao mampitombo ny lanjanao sy ny volanao amin'ireto sakafo sy fanazaran-tena manaraka ireto hampitomboana ny tanjaky ny tongotrao.
Amin'ny natiora dia ahitantsika sakafo abortifacient sasany izay mety hiteraka fanalan-jaza tsy ilaina, fantaro hoe iza izy ireo ary inona ireo sakafo tokony hialanao mandritra ny fitondrana vohoka.
Ny voa sesame dia misy fampiasa betsaka, na amin'ny fandrahoana na amin'ny fampiasana lohahevitra hanatsarana ny hoditra. Fantaro ny tombony azo avy aminy ary inona ny fananany tsara indrindra.
Fantaro ny zava-drehetra momba ny osmosis. Ahoana ny fomba fiasan'ity rafitra fanivanana rano ity, inona ny tombony, ny mahatsara ary ny maharatsy azy ary maro hafa!
Ilaina ny fananana sakafo tsara, fantaro hoe inona ilay piramida sakafo ary ny fomba hanampiany anao hihazona fahasalamana lehibe.
Ny iray amin'ireo safidy tsara indrindra hikarakarana ny vatantsika dia ny fampitsaharana ny fihinanana sira ambony latabatra voadio ary mifindra amin'ny sira Himalaya, fiovana tena mahasalama ho an'ny vatantsika.
Vato ao anaty gallbladder
Fantaro ny momba ny vatosoa. Fa maninona izy ireo no miforona, inona ny soritr'aretin'izy ireo, inona ny fitsaboana misy ary maro hafa!
Mianara momba ny fanazaran-tena tsara indrindra azonao atao ao an-trano mora foana ary misy valiny mahomby tokoa amin'ny fitombenanao. Mety ho an'ny vao manomboka mitady endrika.
Mianara momba ny fananana, tombontsoa, ​​fampiasana ao an-dakozia ary fampidirana komina mahafinaritra hanary lanja, araraoty ny kalitaony.
Tandremo mba hahalala hoe inona ireo fanafody mety indrindra sy sakafo hampihena ny tosidra na fiakaran'ny tosi-dra.
Araraoty ny kalitao rehetra azon'ny menaka argan omena anao, karazana menaka ekolojika avy amin'ny maraokana izay afaka mitsabo aretina isan-karazany.
Masirasira amin'ny labiera
Fantaro hoe inona ny kalitaon'ny masirasira labiera, ny fomba fanjifana azy, ny toerana hahitana azy ary ny toetoetra tsara indrindra ananany.
Inona no atao hoe jelly mpanjaka?
Royal jelly dia mahafinaritra mba hamenoana ny sakafontsika, misy fananana sy tombony lehibe ho an'ny vatantsika.
Soa azo avy amin'ny kale
Ny iray amin'ireo sakafo nanjary nalaza dia ny laisoa kale, zanak'olo-mpiray tam-po amin'ny broccoli voalohany, izay mahafantatra izay tombontsoa tsara indrindra entiny amintsika.
Sakafo hananganana leukositosy
Tokony ho fantatsika fa ny leukosit dia ilaina mba hitazomana ny hery fiarovan'ny vatana, miaraka amin'ireto sakafo manaraka ireto hahatratraranao azy.
Lemon fananana amin'ny vavony foana
Ny lemon dia mety ho salama tsara, tsy maintsy mitady fomba hampidirana azy io amin'ny sakafontsika isan'andro isika, handany rano mafana miaraka amin'ny voasarimakirana isan'andro.
Lisitry ny sakafo tsy matavy
Ny sakafo rehetra avy amin'ny natiora dia salama, na izany aza, tsy maintsy jerenao hoe iza amin'ireo no ilainao hisorohana ny lanjanao.
Soa azo avy amin'ny rano fisotro amin'ny vavony foana
Ny fanapahan-kevitra maro raisintsika isan'andro dia manan-danja amin'ny vatantsika, manomboka amin'ny fisotro rano amin'ny vavony foana izany mba ho salama.
Sakafo manankarena folaka
Jereo hoe aiza ny asidra folika ao anaty sakafo hahazoana fahasalamana tsara, vitamina tena ilaina izy ireo, hikarakara ny sakafonao.
Sakafo manankarena amin'ny omega 6
Ampio ny sakafonao amin'ny asidra omega 3, omega 6 ary omega 9, mandanjalanja ny sakafonao mba ho salama tanteraka.
Sakafo manankarena biotine
Mianara mamantatra izay sakafo tsara indrindra hahazoana Biotine bebe kokoa amin'ny vatanao, singa iray lehibe mitandrina ny fahasalamanao.
Fananan'ny lecithin soja
Ny lecithin soja dia nohanina hisorohana ny kolesterola, manan-karena menaka manitra izy ary misy otrikaina mahasoa ho an'ny vatana.
Sakafo manankarena vitamina E.
Ireto no sakafo tsara indrindra manankarena vitamina E, andiana vitamina tsy mety matavy fantatra amin'ny hoe antioksida sy anti-inflammatoire.
Hita amin'ny sakafo maro ny purine, mety hanimba ny fahasalamantsika ny fihinanana tafahoatra. Mianara mamantatra izay misy azy ireo.
Sakafo manankarena vitamina A
Ny sakafo manankarena vitamina A dia tena mahasalama ny vatantsika, tokony ho fantatsika hoe aiza izy ireo raha te handray soa.
Sakafo manankarena vitamin C C
Manasa anao izahay hahalala ny sakafo tsara indrindra misy vitamina C, ny tombony azo, ny filàna isan'andro ary bebe kokoa momba an'io vitamina io.
Ny iode dia tsy hita amin'ny sakafo rehetra, fa mila an'io mineraly io isika mba ho salama, aza hadino izany amin'ny sakafonao.
Sakafo manankarena amin'ny omega 3
Jereo ny antony tsy ahafahantsika miaina tsy misy omega 3. Manazava ihany koa ireo safidy isan-karazany azo atao hahazoana izany sy maro hafa!
Sakafo manankarena zinc
Fantaro izay sakafo misy ny zinc indrindra, mineraly manan-danja tsy dia fantatra loatra izay manampy antsika ho salama tsara.
Sakafo manankarena vitamina D.
Fantaro ny vitamina D. Azavainay daholo ny momba an'io otrikaina io: sakafo manankarena, tombontsoa ara-pahasalamana, filàna isan'andro ary maro hafa!
Sakafo manankarena potasioma
Lazainay aminao izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny potasioma. Sakafo manankarena, tombontsoa, ​​ny vola tokony ho andavanandro ary bebe kokoa momba an'io mineraly io.
Sakafo manankarena manezioma
Hitanay ny sakafo tsara indrindra manankarena maneziôma, ny tombony azo avy aminy, ny vola ilaina isan'andro ary bebe kokoa momba an'io mineraly io.
Sakafo manankarena vy
Karakarao ny vatanao hahalala hoe iza no sakafo tsara indrindra manankarena vy sy ny fomba tokony hanjifanao azy ireo hatanjaka sy hatanjaka.
Ireto misy fanazaran-tena telo tokony ho fantatry ny tsirairay, na amin'ny fahombiazany, na satria izy ireo no fototry ny hetsika sarotra kokoa.
Diovy amin'ny aretin-sakafo tsara indrindra ny lalan-drà
Ny arteria dia tena zava-dehibe amin'ny fiasan'ny vatantsika araka ny tokony ho izy, holazainay aminao hoe iza avy ireo sakafo tsara indrindra hitazonana azy ireo hadio.
Arosonay ny telo amin'ireo snacks tsara indrindra ho sitrana amin'ny fiofanana noho ny fifandanjana misy eo amin'ny proteinina sy ny gliosidrat.
Ny fampidirana laurel sy kanelina dia fanafody an-trano mahaliana tokoa handoroana tavy, hahafoana ny hamaroana ary hanamorana ny fifindran'ny tsinay.
Raha mahatsiaro reraka mandritra ny fotoana ela ianao dia mety mijaly amin'ny reraka adrenalina ianao, io dia misy reraka manohina ny karazan'olona sasany
Inona avy ireo singa simika manan-danja indrindra amin'ny fiasan'ny vatantsika? Jereo eto izay metaly manandanja indrindra.
Ara-dalàna ny fahaverezan'ny antony manosika hampiofana. Eto izahay dia manazava antony vitsivitsy mahatonga anao hanana faniriana hanao fanatanjahan-tena indray.
Yoga dia manana mpanaraka bebe kokoa isan'andro, fampiharana tsara hanamafisana ny vatana sy ny saina. Amin'ny fotoana fihazakazantsika dia tonga lafatra ny famerenana ny fandriampahalemana
Jereo hoe maninona ianao no mandanja bebe kokoa amin'ny fotoananao sy ny fiantraikan'ny tsingerim-bolana amin'ny lanjan'ny vatanao. Ara-dalàna ve ny mahazo lanja mandritra ny fadimbolana? Fantaro!
Atsaharo ny fihazonana tsiranoka amin'ity fisotroana ity
Zava-dehibe ny mijery tsara, amin'ny fahavaratra dia mijery ireo kilema kely amin'ny vatana isika, ny fihazonana ny tsiranoka dia mety ho olana, fantaro ity fisotroana ity
Ahoana no hitsaboana sunburn
Sunburn dia iray amin'ireo risika lehibe indrindra amin'ny fahavaratra. Mila mandray andraikitra ianao, fa raha tara loatra dia izao no fomba hiatrehana izany.
Adinoy ny aretin-nify amin'ny kitapo dite
Ny aretin-nify dia mety tsy zaka, afaka mahazaka izany dia manome anao vahaolana an-trano sy mahomby izahay, ampio ny tenanao amin'ny kitapo dite sy famaohana.
Ny antony sy ny soritr'aretin'ny tsy fahampian'ny vitamina B12
Ny tsy fahampian'ny vitamina B12 dia mety vokatry ny andian-javatra maromaro ary miteraka soritr'aretina maromaro izay hazavainay eto.
Atsofohy amin'ny fofona mahasosotra
Mety hanelingelina ny fofonaina, aza avela hanelingelina ny torimasonao, mety hiteraka olana aminao sy amin'ny fahasalamanao izany, tombony amin'ity fampidirana nettle ity
Raha te hampitombo ny fahalalahanao hisorohana ny ratra ianao ary ho mailaka kokoa, ny fampiharana ireto torohevitra tsotra ireto dia hanampy anao amin'izany.
Arovy foana ny homamiadan'ny nono miaraka amin'ireto sakafo manaraka ireto
Isan'andro dia voan'ny homamiadan'ny nono ny vehivavy maro kokoa, ny fomba iray hisorohana izany dia ny fihinanana sakafo tsara, sorohy amin'ireo torohevitra ireo
Manazava fomba tsotra iray izahay hanampiana ny vatanao hifanaraka amin'ny fihazakazahana, misy fe-potoana fohy sy fohy.
Inona no atao hoe «sleep»?
Azavainay ny sasany amin'ireo zava-dehibe indrindra momba ny torimaso, toy ny inona izany, inona ny soritr'aretina ananany, ary ny fomba hamantarana azy
Ataovy ao an-trano ny tsimokao
Aza misalasala manararaotra ny torohevitray hamoronana tsimoka ao an-trano, hataonao hafa sy mahasalama ny loviao.
Sakafo mety hanimba ny sakafonao nefa tsy fantatrao
Mety misy antony maro izay misy fiatraikany eo amintsika rehefa tonga amin'ny fiatrehana tsara ny sakafontsika, mifehy ny sakafo raha tsy tianao ny tsy ampoizina
Zavatra dimy tokony ho fantatrao momba ny ketamine
Azavainay ny zavatra dimy manan-danja indrindra momba ny ketamine, toy ny hoe inona izany, izay ampiasainy ary ny tombony azo amin'ny famoizam-po.
Sakafo mahasoa efatra ho an'ny olona voan'ny diabeta
Azavainay hoe iza amin'ireo sakafo mahasoa indrindra ho an'ny olona voan'ny diabeta ary ny antony.
Fanazaran-tena mahasoa telo ho an'ny olona voan'ny diabeta
Azavainay hoe inona ny sasany amin'ireo fampihetseham-batana tsara indrindra azon'ny olona voan'ny diabeta type 2 ary ny antony.
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny aloe vera? Eto izahay dia manazava izay tombony azo amin'ny fisotroana iray amin'ireo zavamaniry lamaody.
Inona no atao hoe colitis ulcerative?
Jereo hoe inona ny colitis ulcerative, ary koa ny antony, ny soritr'aretina ary ny fitsaboana azy.
Ratra amin'ny kitrokely - Karazana, famantarana ary fitsaboana
Ny ratra amin'ny tongotra dia mety ho karazany maro. Eto izahay dia manazava hoe iza izy ireo, ary koa inona ny soritr'aretina ananany ary inona ny fitsaboana misy.
Fa maninona ny fanatanjahan-tena amin'ny rano no tsara ho an'ny olona voan'ny aretin-tratra?
Ny olona voan'ny aretin'ny vanin-taolana dia iray amin'ireo mpiara-dia aminy lehibe indrindra amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena ao anaty rano. Eto no hanazavana ny antony.
Mikosoka an-trano ho an'ny tongotra malemy amin'ity fahavaratra ity
Ho an'ny tongotra malemilemy, andramo ity fikosehana namboarina ity izay manala ny loto mandritra ny hozatra mahavelona sy miala sasatra.
Inona ny atao hoe botulism ary inona no azoko atao hisorohana azy?
Fantaro ny atao hoe botulism, ny antony mampivelatra azy, ary inona no azo atao hisorohana an'io aretina tsy dia fahita sy mampidi-doza io.
Zavatra tokony ho ao an-tsaina alohan'ny hanesorana pimple
Ny fanesorana pimple amin'ny fomba tsy azo antoka dia mety hahatonga ny toe-javatra hiharatsy ary hamela holatra aza. Eto izahay no manazava izay zavatra tokony horaisinao.
Fa maninona no tsara ny manome flossing nify?
Ny flossing dia lakilen'ny fihazonana fahadiovana am-bava tsara. Eto izahay no manazava ny antony tokony hanambatra ny fikosohan-tarehy miaraka amin'ity fitaovana ity.
Ny risika lehibe amin'ny fahasalamana amin'ny fiterahana
Azavainay ny mety hisolo tena ny hatavezina amin'ny kibo ho an'ny fahasalamana, izay tandindomin-doza ny olona ary inona ny vahaolana misy.
Zavatra dimy tokony ho fantatrao momba ny hypothyroidism
Azavainay ny sasany amin'ireo antony lehibe indrindra momba ny hypothyroidism, toy ny antony, ny fitsaboana ary ny fihazonana lanjany mahasalama.
Ahoana no fiantraikan'ny fahanterana amin'ny hery fiarovan'ny vatana?
Inona no mitranga amin'ny hery fiarovan'ny vatana rehefa mihantitra isika? Ary azo atao ve ny manamboatra azy io? Jereo eto.
Inona no atao hoe bypass gastric?
Azavainay hoe inona no misy ny bypass gastric na gastric bypass fandidiana ary manao ahoana ny fanarenana.
Inona no mahatonga ny tsy fahampian-dra?
Fa maninona no mitombo ny tsy fahampian-dra? Eto izahay dia manazava izany sy ireo olana hafa mifandraika amin'ity toe-drà mahazatra ity.
Inona no tokony ho fantatrao momba ny maso maina
Izahay dia manazava izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny maso maina. Ny antony, ny fitsaboana any an-trano tsara indrindra sy ny fitsaboana ankehitriny.
Peppermint - Tombony sy fomba fitehirizana azy
Azavainay ny solontenan'ny peppermint ho tombontsoa ara-pahasalamana sy fomba fitehirizana telo ahafahana mampiasa azy ao an-dakozia ary koa vaovao.
Zava-dehibe amin'ny fahazarana fahazarana tsara
Zava-dehibe tokoa ny fananana fahazarana mahasalama tsara hahafahana mankafy fiainana feno, sakafo, fanatanjahan-tena no toerana voalohany
Ratsy ve ny hena voahodina araka ny lazain'izy ireo?
Tena ratsy amin'ny fahasalamanao ve ny hena voahodina, araka ny filazany? Eto izahay dia milaza aminao bebe kokoa momba ity vondrona sakafo mampiady hevitra ity.
Inona no sakafo tokony hialana alohan'ny fihazakazahana
Mba hampivoarana ara-dalàna ny fotoam-pivarotana iray dia ilaina ny misoroka ireo sakafo ireo ao anatin'ny roa ora alohan'ny fotoam-pivoriana.
Sakafo efatra tena tsara manohitra ny fivontosana
Ireto sakafo lehibe efatra ireto dia hanampy anao raha mijaly amin'ny soritr'aretina maharitra miteraka fivontosana ianao. Ampitomboy ny sakafonao ary mampihena ny adin-tsaina.
Sakafo manokana mandritra ny andro fadimbolana
Manova ny toe-tsaintsika ny fadim-bolana, mahatsapa fanaintainana isika ary mahatonga antsika haniry hihinana zava-mamy, hahafantatra izay sakafo tsara indrindra
Sakafo izay manalavitra bakteria
Ny bakteria dia misy eo amin'ny tontolo iainana, tsy hitantsika izy ireo fa mety hiteraka areti-mifindra, hahafantatra ny sakafo tsara indrindra ho salama
Ny fihenan'ny tosidra ambany dia fantatra amin'ny hoe hypension, tsy manimba toy ny tosidra izany fa tsy maintsy fehezina ihany.
Amin'ny fahatongavan'ny fararano dia miverina amin'ny mpamokatra zava-maniry ny persimon kaki matsiro, ary ny persimmon dia sakafo misy fananana mahasoa maro.
Fahadisoana efatra mahazatra rehefa sendra sery ianao
Raha manana sery ianao, ny fisorohana ireto lesoka manaraka ireto dia hanampy anao ho sitrana haingana kokoa ary tsy hamparatsy ny soritr'aretin'ity aretina ity.
Chamomile sy ireo tombontsoa mahazatra indrindra ao aminy
Ny chamomile dia teo amin'ny fiarahamonina rehetra, ampiasaina ho fitsaboana voajanahary amin'ny fanaintainan'ny vavony na ny fandevonan-kanina mavesatra
Soritr'aretin'ny aretim-po amin'ny lehilahy sy vehivavy
Mba hisorohana ny aretim-po dia zava-dehibe tokoa ny fahalalana ireo soritr'aretinao, izay mety miova arakaraka ny maha-lahy na maha-vavy anao. Eto izahay dia manazava hoe iza izy ireo.
Te hijanona tsy mikohaka ve ianao? Jereo ireto fanafody kohaka ireto izay hanamaivana anao ary hanampy anao hatory tsara kokoa raha mikohaka be loatra ianao. Tsy mety diso!
Vinaigre de cider Apple sy gastrite
Jereo ny tombo-tsoa azo avy amin'ny vinaingitra paoma amin'ny aretina toy ny gastritis na mampihena ny lanja, hikarakarana ny volo ... Nolazainay taminareo rehetra ny momba ny vinaingitra paoma
Inona no atao hoe triglycerides?
Betsaka amintsika no mahalala ny atao hoe kolesterola, saingy mifamatotra amin'ity akora ity izay hitantsika fa manan-danja indrindra toy ny triglycerides, dia manazava isika hoe
Tsy fahampiana vitamina D - soritr'aretina sy risika amin'ny fahasalamana
Azavainay izay soritr'aretina, risika ary antony mahatonga ny tsy fahampian'ny vitamina D, sakafo mahavelona.
Fanontaniana 6 napetraka matetika momba ny osteoporose
Manampy anao izahay hahatakatra ny osteoporose amin'ny famaliana ireo fanontaniana enina napetraka matetika momba ity aretin-taolana ity.
Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny kolesterola
Ny kolesterola rehetra: ny fomba fampidinana azy, ny kolesterola tsara sy ny ratsy, ny HDL ary ny tolo-kevitra hitazomana azy hifehy. Midira ary hikarakara ny fahasalamanao.
Buckwheat hiadiana amin'ny fitohanana
Raha mikarakara ny sakafonao ianao dia hikarakara ny fahasalamanao, mihinana buckwheat hiadiana amin'ny fitohanana indraindray ary mijanona ho mavitrika lava kokoa
Ampitomboy voajanahary ny kolesterola tsara
Ny kolesterola tsara dia azo ampitomboina hahazoana fahasalamana tsara kokoa, azontsika atao amin'ny alàlan'ny fanatanjahan-tena na amin'ny alàlan'ny sakafo tsara
Mitady voasarim-boankazo? Jereo eto ireo izay tsara indrindra hampihena ny lanja, hahazoana angovo na hanampy ny vatana hahatsapa ho salama.
Famantarana ny antony andraisanao siramamy betsaka
Karakarao ny vatanao hahafantatra izay soritr'aretin'ny fihinanana siramamy be dia be, mety hanimba be anao izany
Iray amin'ireo rano mahasoa indrindra, ny rano voanio
Ny rano voanio dia iray amin'ny rano mahasoa indrindra, raha reraky misotro rano mineraly ianao dia avadiho amin'ny rano voanio hahamarika ny mahasamihafa azy
Rosemary dia iray amin'ireo zava-manitra mahazatra indrindra azontsika jerena ao an-dakozia, kanefa, mihoatra lavitra noho izany, mahasoa tokoa ny fampidirana azy
Fitsaboana hernia hernia voajanahary
Fanovana anatomika izay azontsika iainana, ny soritr'aretiny manelingelina dia mety hahatonga antsika tsy mahazo aina, noho izany, mianatra ny tetika tsara indrindra
Oat bran dia safidy iray hafa tena mahasalama raisina ary manomboka hikarakara ny vatanao, sakafo mety tsara hanombohana ny andro
Fitsaboana ny sery amin'ny tantely
Raha tratry ny sery mangatsiaka isika, ny fananana tantely tavoahangy eo an-tànany dia afaka mandray soa avy amin'ny fananany izay mampitony ny fahasosorana, kohaka ary fanaintainana
Jereo ny tombotsoan'ny Goji Berries sy ny fomba hitondrana azy ireo hankafy ny fananany rehetra. Misy fiatraikany ve? Jereo eto.
Ireto zavatra 5 ireto dia mandaitra amin'ny fanoherana hatsiaka
Ireo zavatra dimy ireo dia tena mandaitra amin'ny fisorohana sery na gripa mandritra ny volana mangatsiaka. Ampiharo izy ireo mba tsy harary.
Antony fisalasalana 4 izay tsy misy ifandraisany amin'ny sakafo
Raha mahatsapa maloiloy ianao na eo aza ny fihinanana sakafo mahasalama sy ny fihinanana antonony, ny antony dia mety ho iray amin'ireo voalaza eto.
Dite mena, fananana, tombony ary maro hafa
Betsaka ny voalaza momba ny dite maitso, fa ny amin'ny mena kosa? Mahasoa toy izany koa ve? fantaro ny fananany rehetra ary tadiavo ho anao
Antony handaniana ny ronono
Ny tsilo amin'ny ronono dia zavamaniry tena mahasoa hikarakarana ny aty antsika, mety tsara hisorohana ny aretin'ny aty. Fantaro eto ny fananany rehetra.
Fananana, tombontsoa ary karazana manga
Ny blueberry dia mety amin'ny fikarakarana ny sakafonao sy ny fahasalamanao noho ny tombontsoa sy ny fananany. Fantatrao ve izy ireo?
Ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny triglycerides
Ny triglycerides rehetra sy ny fomba hampihenana azy ireo raha manana tosi-dra ambony ianao. Inona no ifandraisan'izy ireo amin'ny kolesterola? Jereo eto.
Sakafo hahazoana rafitra fiarovan'ny vatana malemy
Ireo sakafo ireo dia hanampy anao hisoroka ny sery sy gripa mandritra ny taona, satria samy hafa ny fananany izay manohana ny hery fiarovan'ny vatana.
Miadia amin'ny halitose miaraka amin'ireto toro-hevitra manaraka ireto
Angamba ianao efa nijaly tamin'ny fofona ratsy tamin'ny fotoana sasany, dia manaova toro-hevitra manaraka mba hisorohana ny halitosis eo an-tanana hahatsapa ho voaro sy tsy misy pitsiny.
Parkinson's sy ny lakileny mba hahalalana bebe kokoa ny aretina
Betsaka amintsika no mahalala ny anaran'io aretina mitaiza io, Parkinson dia fantatra, ...
Fennel, tonga lafatra mba hitandroana ny fahasalamanao
Azo antoka fa efa naheno momba fennel ianao, kanefa, azonao lazaina ve hoe inona ireo tombony sy fatiantoka entiny? Fantaro eto ambany ny tombony rehetra
Manadio ny zanatany amin'ny fibre tsy mety ritra
Ilaina ny fanadiovana kôlônina mba hitazomana ny fandevonan-kanina tsara ary tsy ho atahorana amin'ny resaka homamiadan'ny nono
Lychee, ny voaloboka sinoa
Lychee dia safidy voajanahary tsara hohanina raha reraky ny tsiro nentim-paharazana kokoa ianao, aza misalasala mividy azy ary mahazo tombony
Ahidrano Spirulina, mpiara-miasa amin'ny fahasalamanao
Iray amin'ireo ahidrano faran'izay betsaka lany indrindra dia ny spirulina ary tsy mahagaga izany, lehibe ny tombony sy ny fananany izay mitandrina ny fahasalamantsika eo noho eo.
Atsaharo tsara ny sery
Tsy mahafinaritra mihitsy ny fananana sery eo afovoan'ny fialan-tsasatra, noho izany, fantaro izay vahaolana tsara indrindra an-trano hampiatoana azy tsara
Fa maninona ny moka no manaikitra olona sasany fa tsy ny sasany?
Ny kaikitry ny moka no manahirana indrindra raha any amin'ny toerana mando isika, mianatra mamantatra ny antony mahasarika azy ireo ary miady aminy
Tombony azo amin'ny fihinanana voankazo isan'andro
Ny fihinanana voankazo isan'andro dia afaka mamaha olana ara-pahasalamana maro, afaka mahita fomba mahasalama hitazomana ny vatantsika amin'ny toe-javatra tsara isika
Zavatra efatra tokony hatao rehefa voan'ny aretin'ny urinary (UI) ianao
Raha voan'ny aretin'ny urinary ianao, ireto zavatra efatra ireto, izay azo atao ao an-trano, dia hanampy anao hiroso amin'ny fanarenana.
Ampio ny fiarovanao amin'ny vitamina C an-tranonao manokana
Tsy misy toa ny fihinana fatra vitamina C nomaninao, ity otrikaina ity dia tena ilaina mba hitazomana ny fahasalamana, noho izany, fantaro ity teknika mora ity
Mahita kolesterola amin'ny legioma ve isika?
Zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika ny kolesterola, naseho fa amin'ny legioma dia tsy misy kolesterola ary tonga lafatra izy ireo hikarakarana ny tenantsika.